इटहरीको २० नं वडा वाईसिएलको किल्ला बनाउने- तामाङ - Saptakoshionline
इटहरीको २० नं वडा वाईसिएलको किल्ला बनाउने- तामाङ
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख १६, २०७५ समय: १२:५१:३४
माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन वाईसिएल इटहरी उपमहानगरपालिका स्थित वडा नंम्वर २० हाँसपोसाको अध्यक्षमा सञ्जुके लिम्बु (कृष्ण) नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरिएको छ ।
वाईसियल नगर अध्यक्ष नवीन तामाङको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको भेलाले लिम्बुको अध्यक्षतामा कार्यसमिति गठन गरिएको हो । समितिको उपाध्यक्षमा प्रविन तामाङ, सचिव योगेश घिमिरे, सहसचिव युकेश लिम्बु तथा कोषाध्यक्षमा इश्र्वर पुरी रहेका छन । यस्तै सदस्यहरुमा भानु तामाङ, लक्ष्मण दाहाल, जीवन चौंधरी, आकेश घिमिरे, संजीव गुरुङ, नबिन देउजा, कालु भूजेल, मनोज चौंधरी, नवराज राई, सुमित भूजेल, निरज भूजेल, आकाश मगर, हरि राई, युवराज नेपाली, प्रविण राई, समिर राई तथा बिनम चौंधरी छन् ।
नयाँ कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिदै इटहरी नगर अध्यक्ष नबिन तामाङले पार्टीको निर्देशन अनुसार २० नं. वडालाई युवामैत्री कार्यक्रमहरु संञ्चालन गरिने बताए । बेरोजगार युवाहरुलाई आत्मनिर्भार बनाउदै पार्टीलाई टोलटोलमा बिस्तार गर्ने देखि लिएर बिकृति बिसंग्ती बिरुद्ध खबरदारी गर्ने कार्यमा वाईसिएल युवाको भूमिका रहने उनले बताए । इटहरीको २० नं वडा वाईसिएलको किल्ला बनाउने तामाङले बताए ।
अन्य पार्टीहरुले युवाहरुलाई प्रयोग मात्र गर्ने तथ्यलाई वाईसियले तोड्दै सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने तामाङको भनाई छ । कार्यक्रमा वाईसियल नगर सदस्यद्धय मन राई र संजय तामाङको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
इटहरीको २० नं. वडा काग्रेसको राम्रो प्रभाव रहेको वडा मानिन्छ ।